MOOLKA CAD - NOOCYADA - MUSHROOMS
Magaca mugdi cad laga soo bilaabo tan hore. Ka dibna dadka inta badan la qalajiyo boqoshaada. Sumadda cad ee fangas cad waxay marwalba si cad u caddeyneysaa ka dib markii lagu qalajiyo ama daaweynta kuleylka. Tani waxay ahayd sababta magacan. Caleemaha caddaanku waxay ku xiran yihiin caleemaha Boletus, sidaas darteed magaca labaad ee fangas cad ayaa ah boletus.
Waa muhiim! Ka dib marka la ururiyo boqoshaada, waxaa lagama maarmaan ah in si deg-deg ah loo bilaabo iyaga oo maareynaya, maaddaama miro-cadaanku ay si dhaqso ah u lumiyaan guryahooda. Tusaale ahaan, ka dib 10 saacadood ka dib, boqoshaada waxaa ku jira qeyb ka mid ah macdanta iyo raad raacaha.
Tixgeli nuucyada fangas cad iyo sharaxaadda. Dhammaantood waxay ka tirsan yihiin boqoshaada la cuni karo ee qaybta koobaad waxayna leedahay qaab isku mid ah.
Mushinka cad (dhir) (Boletus edulis)
Waxay u taagan tahay qaabka ugu caansan waxayna leedahay qaab caadi ah. Koofiyadu waa brown ama jimicsi oo midabkiisu yahay 7-30 cm, waxa uu leeyahay qaab guud oo qaabeysan, mararka qaarkood barkin-qaabeeya. Dusha sare waa mid sahlan oo qumman oo aan laga soocin saxarka.
Nooca lugta cirifka ayaa hoos u dhiga hoose, adigoo gaadhaya celceliska qiyaasta 12 cm waxaana loo tixgeliyaa nooca fangaska cad. Dusha sare ee lugta waxaa lagu daboolay mesh wuxuuna leeyahay midab madow. Dhadku waa jilicsan yahay, urta waa jilicsan tahay shakhsi ahaanna waxaa badanaa lagu hagaajiyaa cunto karinta ama qalajinta. Qeybta hoose waa lakabka tubada 1-4 cm ballaaran, taas oo si sahlan loo kala soocayo qashinka waxayna leedahay jilco huruud ah.
Saxarka fangaska waa caddaan cad oo aan isbedeleyn midabka marka jabiyo. Noocaankan waxaa laga helaa kaymaha iyo kaymaha firiryada aagaga waaweyn ee Eurasia, marka laga reebo Iceland, dhammaan qaaradaha, marka laga reebo Australia. Miraha shakhsi ahaan ama qoorta. Forms mycorrhiza leh geedo dardar ah oo aan caleemo lahayn.
Badanaa waxay u muuqataa cagaaran yar yar iyo jaantus. Waxay u diyaarisaa kaymaha gaboobay ee xayawaanka iyo lichen. Xaaladaha jawiga wanaagsan ee muuqaalka guud ee boqoshaada caddaanka ah waxaa loo tixgeliyaa in roobab gaaban oo leh habeen diiran iyo sariir. Waxay jecel yihiin carrada ciidda leh, bacaadka ah iyo loamy iyo goobaha kulul. Goynta waxaa la fuliyaa Juun - Oktoobar.
Tayada nafaqada ee fungus cad waa kuwa ugu sarreeya. Waxaa loo isticmaalaa qaab cayriin, la kariyey, oo la qalajiyey. By content ee nafaqooyinka iyo raad ka mid ah xubno fangaska caddaan ah ma ka badan noocyada kale ee fangaska, laakiin waa kiciyaal xoog leh ee dheefshiidka.
Cilmi-baadhayaashu waxay caddeeyeen in fungus cad ay adagtahay in ay dheefshiido jirka sababtoo ah joogitaanka chitin, laakiin ka dib qalajinta waxay noqotaa dheecaan badan (80%). Ujeedooyinka daaweynta, daawada dabiiciga ah waxay isticmaashaa cirridka lidka-ka-hortagga, difaaca jidhka ee difaaca jirka.
Cawska miro cad (Boletus pinophilus)
Xayawaankani waxay u egyihiin sharaxaadda guud ee fungus cad, laakiin waxay ku kala duwan yihiin sifooyinka qaarkood.. Koofiyadu waa 8-25 cm dhexroor, midab guduud ah oo midabkiisu casaan leh oo leh qalin-jab, laakiin wax yar oo qafiif ah. Maqaarka daboolka jidhku waa casaan. Lugaha gaaban iyo dhumucdiis, 7-16 cm oo dherer ah. Midabkiisu wax yar ayuu ka yar yahay daboolka, laakiin wuxuu daboolay mesh khafiif ah oo khafiif ah. Duufaan bulub ah illaa 2 cm ballaaran oo hurdi ah. Waxaa jira nooc hore oo ah fungus cad oo geed ah. Cabbirada midabada iftiinka badan ee koofiyad iyo qumbaha hoostiisa. Wuxuu soo muuqdaa guga dambe.
Noocani waxay ka kooban tahay mycorrhiza badanaa oo badanaa leh geed. Waxay jecel yihiin carrada bacaadka ah waxayna koraan keli ahaan ama kooxo yaryar. Fungus white pung ayaa ku badan Europe, America America, qaybta Yurub ee Ruushka. Goynta waxay ka dhacdaa Juun ilaa Oktoobar.
Birta qoobka cad (Boletus betulicola)
Mararka qaarkood gobollada Ruushka waxaa loo yaqaan kolosovik sababtoo ah muuqaalka kore ee galley inta lagu jiro dhegta. Noockani wuxuu leeyahay fur furan oo huruud ah, cabbirka uu yahay 5-15 cm dhexroor. Jidhku ma baddalo midabka jimicsiga, laakiin wax dhadhan ma laha. Lugta foosto ah, caarad-bunni midab leh mesh cad. Lakab duuban oo ah jilbaal huruud ah ilaa 2.5 cm ballaaran. Birta boletus waxay sameeyaan mycorrhiza bjørk. Fruiting si khaas ah ama kooxo. Wuxuu jecel yahay inuu koro geesaha ama waddooyinka. Waxaa laga helaa Western Europe, iyo Ruushka - gobolka Murmansk, Siberia, iyo Bariga Fog. Goynta waxay ka dhacdaa Juun ilaa Oktoobar.
Ma taqaanaa? Koritaanka fangas cad ayaa la sameeyaa sagaal maalmood, laakiin waxaa jira noocyo qaar ka mid ah oo koraya 15 maalmood.
Mugdi Dhuxul-cadaan ah Mushroom White (Boletus aereus)
Marmarka qaarkood noocyada noocan ah waxaa sidoo kale loo yaqaannaa bakoor ama lowska xayawaanka ah. Koofiyadu waa fareem, qaabka isgoysyada, iyagoo gaaraaya dhexroorka 7-17 cm Maqaarku wuxuu noqon karaa mid siman ama dildilaacyo yaryar, madow madow, ku dhowaad madow. Jidhku waa caddaan, wuxuu leeyahay dhadhan wacan iyo ur ah, marka jabsan, waxoogaa madow. Lugta waa cylindrical, weyn, casaan-bunni midab leh mesh-midab leh midab leh. Lakabka tuubadu wuxuu leeyahay midab jaale ah iyo ballac ah illaa 2 cm, laakiin markii la cadaadiyo wuxuu noqonayaa midab dahab ah. Noocyadaas waxaa lagu qaybiyaa kaymaha adkaa oo leh jawi diiran. Inta badan waxaa laga helaa Western Europe iyo Southern Europe, Sweden, North America. Xilliga jiilaalka wuxuu ka bilaabmaa Luulyo ilaa Oktoobar, laakiin wuxuu u muuqdaa Austria in May iyo June. Waxaa ku jira buugaagta casriga ah ee Ukraine, Montenegro, Norway, Denmark, Moldova.
By dhadhanka waa qadarinaya boorsooyin badan oo ka badan qoryaha miraha cad. Waxay leedahay calaamado dibedda ah oo leh miro laysku qurxin karo (Xerocomus badius), oo jidhkooda buluug ah iyo lugtu aysan laheyn wax xaraash ah. Waxaa sidoo kale laga helaa kaymaha qallafsan oo isku dhafan waa fangas cad oo nus ah (Boletus subaereus), oo leh midab khafiif ah.
Xajka macdanta cad ayaa ka duwana mid ka mid ah dhirta oo ah midab khafiif ah oo ka mid ah furka iyo mesh cirif badan oo lugta leh. Waxaa loo tixgeliyaa ugu horreyntii dhammaan noocyada likaha cad. Koofiyadu waxay gaartaa dhexroorka 6-30 cm waxayna leedahay midab khafiif ah. Qashirku waa caddaan cad, oo tuubooyinka ayaa leh calaamad hur ah. Qalabku waa mid gaaban, dhumuc badan, koox qaabeysan, midab madow iyo kala duwanaanta noocyada kale iyadoo joogitaanka jiritaanka mesh weyn. Mushinka cad cad wuxuu leeyahay ur wacan iyo dhadhan macaan oo macaan.
Dhumucda lakabka tubada ilaa 3.5 cm, midabkiisu waa kala duwan yahay caddaan ilaa cagaaran-jaalle. Tilmaamaha noocan ah waa joogitaanka dildilaaca on maqaarka ee boqoshaadii hore. Noocyadaasi waxay sameeyaan mycorrhiza oo leh kalluunka, geedkii, lafdhabarta, hornbeam iyo koritaanka geesaha ee qalalan, carrada alkaline.
Waa dhif udeynayaa cayayaanka. Wuxuu kordhay Yurub, Waqooyiga Afrika, Waqooyiga Ameerika. Mujuurida waxaa la sameeyaa laga bilaabo May ilaa Oktoobar. Fangaska cad cad wuxuu u eg yahay bjørk, kaas oo leh fur furan iyo shabaqa gaaban.
Miro cadaan ah (Boletus quercicola)
Muuqaal aad u kala duwan oo ah fangas cad oo caddaan ah waa koofiyad madow ah oo leh muraayad jajab ah. Waa mid aad u madow oo ka mid ah noocyada bjørk. Jidhku wuu ka yar yahay noocyada kale. Waxay ku koraan Caucasus, Primorsky Krai. Goynta waxaa la fuliyaa Juun-Oktoobar. Waxay u koraan si caan ah, taas oo aan caadi ahayn boqoshaada caddaan.
Waa muhiim! Aad bay u egtahay likaha cad - xoqin. Waa wax la aqbali karo sababtoo ah qadhaadhkiisa. Farqiga ugu weyn ee ka yimaada fangaska caddaanka ah waa lakabka tubada ee casaanka iyo midabka madow ee mesh ee lugta.
Mushinka midab-madow (Boletus impolius)
Fungus semi-cad cad ayaa iska leh cirridka boletus waxaana loo yaqaannaa boletus yellow. Daboolku wuxuu gaadhaa dhexroor 5-15 cm oo leh maqaarka oo saafi ah oo ah midab khafiif ah oo khafiif ah. Saxarka fangaska waa cufan, iftiin huruud ah. Dhadhanka waxoogaa macaan, iyo urta waxay xasuusisaa carbolic acid.
Lugta waa dhuuban yahay, qaabka cylindrical qaab, ilaa 15 cm sare, caws engegan. Nidaamka maskaxda ee lugta ayaa ka maqan, laakiin dusha sare waa mid adag. Duufaan buluug ah ilaa 3 cm oo huruud ah. Waxay ku koraan dhirta, kalluunka, kaymaha hornbeam iyo waxay jecel yihiin carrada dhoobada qoyan. Boletus Yellow ayaa iska leh boqoshaada thermophilic waxayna ku badan tahay Polesie, Carpathian, qaybta dhexe ee koonfurta ee Ruushka. Goynta waxaa la sameeyaa laga bilaabo Maajo ilaa dayrta.
Ilaha qaarkood, sababtoo ah urta gaarka ah ee lagu sharraxay sida fungus la aqabili karo. In dhadhan ma aha mid ka hooseysa mugdiga caadiga ah cad. Ka dib markaad qalajiso ka dibna aad u kululaato urta way wada baabi'i doontaa. Calaamadaha dibadda waxay u egtahay gabadh yar oo boletus ah, laakiin way ka duwan tahay adigoo urinaya ur aan caadi ahayn oo aan isbedelayn midabka qashinka ee fasaxa.
Boletus gabadh (Boletus appendiculatus)
Waxay u egtahay sida sharaxaadda leh jaleecada jaalaha ah, laakiin waxay leedahay ur wacan, hilibkana jimicsiga ayaa noqda mid buluug ah. Cap ee dhexroorka gaaray 8-20 cm, wuxuu leeyahay midabka dahabka ama casaan-madow-brown. Saxarka fangaska waa jaalaha, oo leh buluug buluug ah. Lugta waa dhumuc, wuxuu leeyahay cidhiidhi ah saldhigga wuxuuna koraa 7-15 cm oo sarreeya, wuxuu leeyahay midab khafiif ah waxaana lagu daboolaa mesh jaale ah. Lakabka tuubadu waa ilaa 2.5 cm qaro weyn, midab huruud ah oo buluug ah marka la cadaadiyo. Borovik gabadhu waxay samaysataa mycorrhiza geedo gaajo leh oo kordhay koonfurta Yurub. Goynta waxaa la fuliyaa inta lagu jiro xagaaga - dayrta.
Boqortooyada Borovik (Boletus regius)
Royal Borovik waxay ka duwan tahay noocyada kale ee furka casaan-gaduudka ah iyo lugaha huruudka ah oo leh qaab maskax leh oo leh qaybta sare. Daboolku wuxuu gaadhaa dhexroor 6-15 cm oo leh maqaarka oo sifiican ah, laakiin mararka qaarkood waxa lagu soo daboolaa dildilaaca mesh. Saxarka fangaska waa cufan, huruud ah oo midab leh, jeex jeexjeexa buluug. Mushinka wuxuu leeyahay ur wacan oo dhadhan. Lugta dheer, waxay leedahay dherer ah 5-15 cm, lakabka tuubada ayaa ilaa 2.5 cm oo huruud ah.
Mushaharka madow ee madow wuxuu ku koraa kaymaha adkaa. Waxay diyaarisaa carrada ciidda iyo ciidda. Waxaa laga helaa Caucasus, Bariga Fog. Wakhtiga khudradda waa Julaay - Sebtembar. Mushinka wuxuu leeyahay dhadhan fiican waxaana loo isticmaalaa qaab caano ama qasacadaysan.
Ma taqaanaa? In Ukraine, gobolka Ivano-Frankivsk, oo ku dhow tuulada Verkhniy Maidan, 118 xabbo oo boqoshaada caddaan ah ayaa lagu ururiyey 16 mitir oo laba jibbaaran. Mugdi cad oo miisaankeedu yahay 6.75 kg ayaa laga helay Ruushka meel u dhow Vladimir 1964.
Mushaqa cad waa midka ugu caansan uguna jecel qof kasta oo soo iibsada. Faa'iidadeeda waxaa laga heli karaa labalaab weyn iyo dhadhan fiican iyo tayada nafaqada. Markaad ururiso boqoshaada, marnaba iloobin xukunka asaasiga ah ee soo iibsashada musqusha: Haddii aadan hubin xitaa mushah qibrad leh, iska tuur, ha u qaadin fursadaha!